Ilifa Trader Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Ilifa Trader Forex Ukuhweba Isu
Septhemba 13, 2021
Umkhuba nomfutho, lezi zinhlobo ezimbili zokuhamba kwemakethe zivame ukushintshaniswa. Yize bobabili banokufana okuthile, laba bobabili banokungafani okuthile.
Ithrendi ngokwezwi nezwi isho ukuqondiswa okujwayelekile lapho okuthile kukhula khona. Ngo zokuhweba, kungachazwa njengokuqondisa okujwayelekile lapho intengo ihamba khona. Lokhu kusho ukuthi ingxenye enkulu yeseshini yokuhweba, Intengo ihamba ngendlela ethile. Abathengisi bezenzo zentengo bavame ukubheka ukuthi imakethe izohamba phambili uma intengo ihlala iphakama kakhulu futhi yehla uma kwenzeka kuba phezulu, noma wehlise ama-highs futhi wehle uma kwenzeka kwehla phansi.
Ngakolunye uhlangothi i-Momentum isho ubuningi bokunyakaza komzimba ohambayo olinganiswa njengomkhiqizo wobukhulu bawo kanye nejubane lawo. Ngo zokuhweba, besingakuhumusha njengamandla okunyakaza kwentengo ngokuya ngevolumu yayo (isisindo) nebanga elihanjiwe ngaphakathi kwemigoqo embalwa (Isivinini). Abathengisi abehlukene bakhomba umfutho osuselwa ezicini ezahlukahlukene. Abanye basebenzisa izinkomba ezibonisa ukuthi intengo icindezela ngokuqinile ohlangothini olulodwa. Abanye basebenzisa izinti zamakhandlela ezinomzimba omude onemicu emincane ekhombisa ukuthi intengo ihambe kakhulu ohlangothini olulodwa ngevolumu ephezulu.
Zombili lezi zinhlobo zama-setups zisetshenziswa ngabadayisi abaningi njengecebo lokuhweba. Lokhu kubizwa ngamasu wokulandela mkhuba kanye nomfutho. Ilifa Trader Forex Ukuhweba Isu ihlanganisa izici umfutho kanye mkhuba usebenzisa izinkomba ezimbili ezingasebenza synergistically.
2 Inkomba ye-Legacy Trader MT4
4.3 Indlela ukufaka Legacy Trader Forex Ukuhweba Isu?
Inkomba Yeziteshi Zempahla (I-CCI) yinkomba yezobuchwepheshe esetshenziswa abahwebi ukukhomba umkhuba, umfutho kanye nokuhlehliswa okushiwo ukuze ulindele ukunyakaza okujikelezayo kwentengo.
I-CCI iyinkomba ekhangayo ehlela umugqa ongaya kokuhle noma okubi. Ifomula eyisisekelo esetshenziswe yile nkomba ibangela ukuthi intengo ihlale ngaphakathi kwebanga le- -100 uku 100 cishe 70% uku 80% zesikhathi. Umugqa ovumayo ukhombisa ukuchema kwe-bullish, ngenkathi umugqa ongemuhle ukhombisa ukuchema kwemakethe ye-bearish. Ulayini ohlala uhlala ngaphezu kuka-zero isikhathi esiningi ukhombisa ukuthambekela kwe-bullish, ngenkathi umugqa ohlala umubi ukhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Umugqa ongenhla 100 ikhombisa isimo sentengo ethe xaxa, ngenkathi ulayini ongezansi -100 ikhombisa isimo sentengo eyeqile. Ehlangothini le-flip, umugqa ohlale ucindezela ngenhla 100 ingakhombisa umfutho we-bullish, kuyilapho umugqa ohla njalo ngezansi -100 ingakhombisa umfutho we-bearish.
Inkomba ye-Legacy Trader MT4
Ifa Trader liyinkomba yangokwezifiso okuyinkomba yezobuchwepheshe elandela ukuthambekela.
Imane ihlele umugqa onamachashazi eshadini lentengo kanye namakhandlela entengo. Ulayini ushintsha ngezansi kwentengo noma kunini lapho inkomba ithola khona ukuthambekela kwe-bullish futhi ishintsha ngaphezu kwentengo noma kunini lapho ithola ukuthambekela kwe-bearish. Umbala womugqa nawo uyashintsha kuye ngokuya ngakunye kwethrendi. Umugqa we-aqua ukhombisa ukuthambekela kwe-bullish, ngenkathi ulayini we-magenta ukhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Ulayini ungasetshenziswa ngezindlela ezihlukile.
Okokuqala, ingasetshenziswa njengesihlungi somkhuba wokuhweba ngomfutho wesikhashana. Abahwebi bangasebenzisa inkomba ukugwema ukuthatha ukuhweba okuphambene nomhlahlandlela wesimo samanje.
Ingasetshenziswa futhi njengesignali yokuguqula inkambiso. Abahwebi bangasebenzisa ukushintshwa kwemigqa nokuguqulwa kombala wayo ukukhombisa ukuhlehla kwethrendi futhi bakusebenzise njengophawu lokungena.
Okokugcina, kungasetshenziswa ukubekwa kokulahleka kokuyeka. Abahwebi bangabeka ukulahleka kokuyeka kokuhweba ngaphesheya komugqa kude nesenzo sentengo ukuze bagweme ukumiswa ngaphambi kwesikhathi.
Leli su lithatha ukuhweba noma nini lapho imakethe ikhombisa izimpawu zomfutho oqinile nomkhuba. Ngemuva kwalokho kuthatha okufakiwe kokuhweba ekushintsheni kwesimo sesikhathi esifushane okuhambelana nomfutho omkhulu wesithombe nomkhuba.
Isibonisi seCCI sisetshenziselwa ukukhomba umfutho oqinile nomkhuba. Kusetshenziswa inkomba yeCCI, Umfutho we-bullish uzokhonjwa ngomugqa osanda kwephula ngenhla 100, ngenkathi umfutho we-bearish uzokhonjwa ngomugqa osanda kuwa ngezansi -100. Noma kunjalo, ukwephula ngale kwaleli banga akulufanelekeli ngokushesha ukusethwa kwethrendi. Ithrendi yemakethe nayo kufanele ibambe. Kususelwa kunkomba yeCCI, umugqa weCCI kufanele uthole ukwesekwa noma ukumelana ngokuya nge-midline eyi-zero. Intengo kufanele ihlale ikhombisa ukukhombisa ukuthambekela kwe-bullish noma okungalungile okukhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Uma ukuthambekela nomfutho kuqinisekisiwe, lapho-ke singaqala ukubheka ukubuyiselwa emuva kwesimo sesikhathi esifushane okuhambisana nomfutho omkhulu wesithombe nomkhuba.
Kusetshenziswa inkomba ye-Legacy Trader, sizobe sithatha ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa ushintsha futhi ushintsha umbala okhombisa ukuqondiswa kwethrendi enkulu.
Inkomba ye-Legacy Trader MT4 (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Isikhathi seCCI: 48
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 30-umzuzu, 1-ihora namashadi wehora-4
Amabili Wemali: ngababili ezinkulu nezincane plus ngazimbili crossover
Ulayini weCCI bekufanele ngabe usanda kwephula ngenhla 100.
Ulayini weCCI kufanele uhlale ngaphezu kuka-zero.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho inkomba ye-Legacy Trader ishintsha ngezansi kwentengo nezinguquko ku-aqua.
Setha ukulahleka kokuma ngezansi komugqa we-Legacy Trader.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa we-Legacy Trader usuka ngaphezu kwentengo futhi ushintshela kuma-magenta.
Ulayini weCCI bekufanele ngabe usanda kuwa ngezansi -100.
Ulayini weCCI kufanele uhlale ngaphansi kuka-zero.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho inkomba ye-Legacy Trader isuka ngaphezu kwenani nezinguquko kuma-magenta.
Setha ukulahleka kokuma ngaphezu komugqa we-Legacy Trader.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ulayini we-Legacy Trader usuka ngezansi kwentengo futhi ushintshela ku-aqua.
Lelisu lokuhweba isu elilandela mkhuba elihlanganisa izinto zomfutho ezisuselwa esikhathini eside.
Intengo icindezela ngokuqinile ngomfutho ivame ukulandela futhi iqhubeke nokucindezela kwentengo yangaphambilini. Lokhu kuvame ukuqala isimo semakethe esihamba phambili esivumelana kakhulu nokuhweba okunamandla kwesikhashana kwesikhashana.
Lelisu livumela abahwebi ukuthi basebenzise isimo esinjalo semakethe nenzuzo emakethe.
I-Legacy Trader Forex Trading Strategy iyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Legacy Trader Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Legacy Trader Forex Ukuhweba Isu?
Landa i-Legacy Trader Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha I-Legacy Trader Forex Trading Strategy
Uzobona i-Legacy Trader Forex Trading Strategy itholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleInkomba ye-RSI MT5 ejwayelekile
Isihloko esilandelayoShintsha Amaphesenti Inkomba ye-MT4